#Yariisow:Sadex kun oo Ciidan ah oo lagu wareejinayo amniga Muqdisho - Get Latest News From Horn of Africa
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in Ciidamo cusub oo Boolis ah lagu wareejinayo amniga Magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir C/Raxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay in Ciidamadaasi oo uu hadda tababar u dhamaaday ay sugi doonaan Amniga Magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro Bisha Ramadaan ee soo socota.
Yariisow ayaa sheegay in Ciidamadaasi ay yihiin kuwo diyaarsan, Akhlaaq leh oo aan sidoo kale Balwad lahayn.
Waxaa kale oo uu Guddoomiyaha intaas ku daray in tababarka Ciidankaasi ay bar bar socotay deriseynta oo uuu sheegay in iyana ay qeyb weyn ka qaadaneyso sugidda amniga Caasimadda.
Dowladda Soomaaliya ayaa 30kii Bishii March waxaa ay ku dhawaaqday howlgallo cusub oo laga fulinayo Magaalada Muqdisho si loo xaqiijiyo amniga waxaana socda baaritaanno habeennada qaar lagu galo guryaha degmooyinka qaar.
47 mins ago 31,205
12 hours ago 97,135
12 hours ago 12,577
12 hours ago 24,742
Aug 18, 2019 78,130
Aug 18, 2019 2,110
Aug 18, 2019 2,676
Aug 17, 2019 12,615